China In-Ground GL150 fekitari uye vagadziri | Akazvarwa
Chidiki chakadzokororwa chigadziriso chakazara pamwe chakabatana CREE LED pasuru uye 120 degree bhinzi sarudzo.Temperedi girazi, yegungwa giredhi 316 Stainless Simbi yekuvaka yakapihwa IP68.Product tsoka ye 76mm dhayamita inovimbisa kuita kwakasiyana-siyana kushandiswa. . Kune akasiyana tembiricha tembiricha kusarudza kubva. Zviri nyore kudzora, zvinogona kuona iro shanduko rekushandura basa, kupenya kwakakwira, kuderera kwesimba kushandiswa, uye yakapfava mwenje. Pane maviri dhizaini sarudzo yemwenje uyu, imwe imba yakatenderera yemarambi uye imwe imba yemwenje. Maumbirwo ese ari maviri zvigadzirwa zvavo zvemhuri. Rambi rakabatanidzwa repasi pevhu rakagadzirwa neyakagara-yakadzika chubhu, iri nyore uye nyore kuisa. Girazi repamberi-rakachengetedzwa rakadzivirirwa rinopesana zvakanyanya, uye mota yekutyaira inogona kufambiswa yakananga yapfuura.
Optics 120 °
Ambient tembiricha -20 ° C + 45 ° C
Avhareji yehupenyu 5O, OOOHrs
Zvishongedzo (Inesarudzo) Ehe
GL150 PASI CHIEDZA
GL150 CREE CW.WW, NW, Red Green, Bhuruu, Amber 120 Nguva dzose yazvino 350mA Series 3M 2X0.75mm² Cable 3W 300LM D76X47 D65
GL150D CREE CW.WW, NW, Red Green, Bhuruu, Amber 120 Constant voltage 12 / 24VDC Kufanana 3M 2X0.75mm² Cable 3.5W 300LM D76X47 D65
GL150SQ CREE CW, WW, NW, Red Green, Bhuruu, Amber 120 Nguva dzose yazvino 350mA Series 3M 2X0.75mm² Cable 3W 300LM 76X76X47 D65
GL150RGB EDISON RGB 120 Nguva dzose yazvino 350mA Series 2x3M 4X0.5mm² Cable 7W N / A. D76X47 D65
GL150DMX-RGB EDISON RGB 120 Constant voltage 24VDC DMXController Kufanana 1.1M 4X0.5mm² Cable 3.5W N / A. D76X47 D65
DMX decoder yakavakwa * IES Dhata rutsigiro.
Pashure: Mukati-Ground GL166
Zvadaro: Mukati-Ground GL140
Zvese zvigadzirwa zvinozoiswa mumapaketi uye kutumirwa chete mushure mekunge zvigadzirwa zvese zvapasa akasiyana index bvunzo, uye kurongedza ndicho zvakare chakakosha chikamu chisingakwanise kufuratirwa. Sezvo marambi esimbi isina waya ari kurema, isu takasarudza makatoni akakora uye akaomarara kune ruzivo rwepakeji kuti tione kuti chigadzirwa chinokwanisa kudzivirirwa zvakanaka kubva pakubata kana kuputika panguva yekufambisa. Chigadzirwa chega chega cheOubo chinoenderana nebhokisi remukati rakasarudzika uye rinosarudza inoenderana mhando yekupakata zvinoenderana nehunhu, nyika uye huremu hwezvinhu zvinotakurwa kuona kuti chigadzirwa chimwe nechimwe chakarongedzwa pasina kusiya mukaha pakati pebhokisi nechigadzirwa zvakagadziriswa Mune bhokisi. Yedu yakarongedzwa kurongedza ndeye brown brown yakakomberedzwa yemukati bhokisi uye bhuruu yakakomberedzwa yekunze bhokisi. Kana mutengi achida kugadzira yakatarwa bhokisi bhokisi yechigadzirwa, isu tinogona zvakare kuzviita, chero bedzi iwe uchizivisa kutengesa kwedu pamberi, tichaita zvinoenderana zvinoenderana mukutanga nhanho.
Chigadzirwa chega chega chinozoedzwa 100% yemagetsi paramende bvunzo, 100% kuchembera bvunzo uye 100% isina mvura bvunzo Zvinoenderana nemakore mazhinji echiitiko chechigadzirwa, nharaunda yakatarisana nechigadzirwa iyi inowedzera zvakapetwa zvakanyanya kupfuura mwenje yemukati yekunze- pasi uye pasi pemvura marambi esimbi isina tsvina. Isu tinonyatsoziva kuti mwenje haingaone chero matambudziko munguva pfupi munzvimbo dzakajairika. Kune zvigadzirwa zveEurborn, isu tinonyanya kufunga nezvekuona kuti mwenje unokwanisa kuzadzikiswa kwenguva refu kushanda kushanda munzvimbo dzakasiyana dzakashata. Munzvimbo yakajairwa, bvunzo yedu yemamiriro akaenzanisirwa yakawandisa nguva. Iyi nharaunda ine hukasha inogona kuratidza mhando yemwenje yeLED kuona kuti hapana zvigadzirwa zvakaremara. Chete mushure mekuongororwa kuburikidza nematanho ndipo Ober ichatumira zvigadzirwa zvakanakisa kwatiri Ruoko rwevatengi.
Mukati-Ground Kunze Kwechiedza